Gunimo dhereg leh waxaan ka dooranay gobanimo gaajo leh: Madaxweyne Farmaajo - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Gunimo dhereg leh waxaan ka dooranay gobanimo gaajo leh: Madaxweyne Farmaajo
Madaxweynaha Somaliya oo shacabka la hadlay ayaa sheegay in damacii Kiiniya uu fashilmay. Madaxweynaha oo qoraal u akhriyay sida wararka muuqaal baahiyaha ka baxa ayaa marka hore u mahadceliyay RABIIGEENA ina waafajiyay inaan damacaas aragno, wuxuu sidoo kalena u mahadceliyay shacabka Somaliyeed sheegayna inay iyagu leeyihiin guushan.
Maxkamada caalamiga ah ayaa maanta xukuntey dhamaan intii Somaliya doonaysay ayadoo aan waxba ka tegin. Baddan ay xukuntey ayaa waxa ku jira dhul baaxadleh oo ay rabtey Kiiniya inay ceelal shidaal iyo gaas ka qodato.
”Sadex bilood markii aan xukunka la wareegay waxay Kiiniya bilowday farogelinta siyaasada gudaha ee dalkeena ayagoo markiiba dalkooda ka soo abaabuley ururo siyaasadeed ayuu yiri madaxweyne Farmaajo.
”Waxay isku dayeen inay na gu’doomiyaan ayagoo adeegsanaya shisheeye ay isku danno yihiin, waxa intaas raacsan weeraro qaawan oo joogta ah sida burburinta shirkadaha dalka ayuu raaciyay.
Waxa xiga weeraro ay ka soo qaado qaramada midoobey si ay gebi ahaanba u curyaamiso dawlada iyo dhaqaalaha so gala, ayadoo rabtey in qol madow loogu xalaaleeyo badda ayuu qirey madaxweynuhu.
”Damiirkeena marnaba nama siinayo inaan ku bedelo dano shaqsi iyo mid muddo xileedkeedu go’an yahay ayuu yiri madaxweynaha. Waxaan diidney gunimo dhereg leh waxaanan ka doorbidey gobanimo gaajo leh ayuu ku khatimay madaxweynaha.
Hadalka madaxweynaha ayaan laga sii deyn radiyaha iyo telefishan ahaan jirey mid qaran haddase noqday mid qabiil, waxayna qayb ka yihiin weerarka lagu hayo qaranimada dalka.